“Lampard ma ahan murashaxa kaliya ee ku guuleysan kara inuu noqdo badalka Sarri” – Petr Čech – Gool FM
“Lampard ma ahan murashaxa kaliya ee ku guuleysan kara inuu noqdo badalka Sarri” – Petr Čech
(London) 30 Juunyo 2019. Inkastoo si xoogan lala xiriirinayo in Frank Lampard uu noqonayo macalinka cusub ee Chelsea, hadana Petr Čech oo ka mid ah halyeeda Blues isla markaana dhawaan dib ugu soo laabtay isagoo ka mid noqonaya maamulka kooxda ayaa xaqiijiyay inay jiraan magacyo kale ee u sharaxan inay noqdaan badalka Maurizio Sarri.
Maurizio Sarri ayaa dhowr isbuuc kahor ka dhaqaaqay garoonka Stamford Bridge si uu u hogaayo kooxda Juventus, Tan iyo markaas waxaa sii xoogeysanayay hadal heynta magaca macalinka cusub ee xigi doona Chelsea, waxayna wararka qaar sheegayaan in Massimiliano Allegri uu iska diiday codsi kaga yimid naadiga reer London.
Frank Lampard ayaa ah magaca qofkasta uu hadal haayay dhawaanahan, laakiin waxaa taasi iska diiday Petr Čech:
“Kooxda ayaa sheegtay tiro dhowr musharaxiin ah”.
“Frank Lampard waa mid ka mid ah, lakiin dabcan kahor inta uusan kooxda ku soo laaban waxaan dooneynaa inaan xallino dhibaatadan, waa arin aad muhiim ugu ah, kooxda cida imaan doonta”.
“Tababaraha cusub wuxuu heysan doonaa fikradaha looga baahan yahay kooxda, waxaan dooneynaa inaan dhameystirno kooxdeena xilli ciyaareedka soo socda”.
“Waxaan ka dooneynaa macalinka cusub ee imaan doono inuu fiiriyo ciyaartoyda islamarkaana uu go’aan ka gaaro kuwa uu ula safri doono Japan”.
Group-ka A ee koobka qarammada qaaradda Afrika 2019 oo caawa la soo gabagabeeyey …+ SAWIRRO